हवाइ जहाजकाे ठक्करबाट घाँस काटिरहेकी महिलाकाे मृत्यु
July 13, 2021 N88LeaveaComment on हवाइ जहाजकाे ठक्करबाट घाँस काटिरहेकी महिलाकाे मृत्यु
एजेन्सी । कहिलेकाहीं जिन्दगीमा एकदम नसोचेको घटना घट्छ । यस्तै एउटा घटना यी महिलासँग घटेको छ । घाँस काटिरहेकी एक महिलालाई पछाडिबाट हवाइजहाज आएर ठकर दिँदा महिलाको मृत्यु भएको छ । यी २७ वर्षकी महिलाले दिउँसो करिब १ बजे क्यानडाको मोन्टारियलमा रहेको सेन्ट स्पिरिट एयरफिल्ड नजिकै ट्रेक्टर चलाएर घाँस काटिरहेकी थिइन् । त्यही बेला पछाडिबाट […]
बालुटारमा केपी ओलीको तीन वर्ष : गफ असाध्यै धेरै काम कम, यिनीहरूले नराम्राेसँग डुवाए ओलीलाई
July 13, 2021 N88LeaveaComment on बालुटारमा केपी ओलीको तीन वर्ष : गफ असाध्यै धेरै काम कम, यिनीहरूले नराम्राेसँग डुवाए ओलीलाई
काठमाडाैं । २०७४ फागुन ३ गतेदेखि मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले पदमुक्त गर्यो । ओली मगलबारनै बालुवाटारबाट बालकोट गएका छन् । साढे तीन वर्ष अघि दुई तिहाइ मतका साथ सरकारमा शानदार इन्ट्रि गरेका ओलीले यसबीचमा दुई तिहाइबाट बहुमत, अल्पमत हुँदै कामचलाउ सरकारका रुपमा शासन सञ्चालन गरे । एउटै कार्यकालमा […]
प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो निर्णय : चैत मशान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप
July 13, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो निर्णय : चैत मशान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मशान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारको […]
सरकार बनाउन नपाउदै देउवामाथि आईलाग्यो स’ङ्कट
July 13, 2021 N88LeaveaComment on सरकार बनाउन नपाउदै देउवामाथि आईलाग्यो स’ङ्कट
काठमाडौं । सरकार नबन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संकट आइपरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समुहले साथ छाड्ने भएको छ । नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुलाई आफू अब गठबन्धनमा नरहेको जानकारी गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतको कोटेश्वरमा बसेको बैठकमा […]
July 13, 2021 July 13, 2021 N88LeaveaComment on डडेलधुरामा स्कूल चलाउन गाेरू बेचेका थिए देउवाले ….
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसंगै उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन्। देउवाको पाँचौ इनिङ सुरुवात हुन थालेपछि उनको जन्मथलो डडेल्धुराको आशिग्रामस्थित मटेला, रुवाखोलामा […]
शपथ लिएपछि देउवालाई माधव नेपालले दिए पहिलो बधाई
July 13, 2021 N88LeaveaComment on शपथ लिएपछि देउवालाई माधव नेपालले दिए पहिलो बधाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बधाई दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथ समारोह सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिने क्रममा सबैभन्दा पहिले नेता नेपालले हात मिलाएर बधाई दिए । त्यसपछि क्रमश नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी […]
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकाे यस्ताे छ राजनीतिक जीवनी
July 13, 2021 N88LeaveaComment on पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकाे यस्ताे छ राजनीतिक जीवनी
काठमाडौं । पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जन्म वि.सं. २००३ जेठ ३१ गते डडेल्धुरा जिल्लाको साविकको असिग्राम गाविस वडा नम्बर ५ मा भएको हो । गाउँ नजिकै रहेको असिग्राम प्राथमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहको अध्ययन गरेका देउवाले डडेल्धुरा सदरमुकाममा रहेको महेन्द्र माविबाट निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरे । उनले […]
July 13, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवाले लिए शपथ
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आजै दिउसो देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। […]
July 13, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले ओलीलाई घोक्र्याएर निकाली छोडे !
काठमाडाैं । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीवाट च्यूत भए। लगभग दुईतिहाई र अपार जनसमर्थनसहित प्रधानमन्त्री वनेका ओली सोहि अवस्थामा विदा हुन पाएनन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश जारी गरेपछि अपमानित भएर ओली विदा भए । सतही रुपमा हेर्दा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले […]
देउवा सरकारको गृहमन्त्रीमा खाँड, अन्यमा को–को ?
July 13, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारको गृहमन्त्रीमा खाँड, अन्यमा को–को ?
काठमाडाैं । नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । अर्थमन्त्रालय नेकपा माओवादीले लिने भएपछि कांग्रेसको भागमा परेको गृह मन्त्रालयमा खाँडलाई दिएर आजै शपथ गराउन लागिएको हो । कांग्रेसको मुख्य सचेतक रहेका खाँड यसअघि रक्षा र सिँचाइमन्त्री भइसकेका छन् । यस्तै, […]